3 Qaab Oo La Hubo Oo Loogu Guuleysto Kalsoonida Xaaskaaga - Aayaha
Jahwareerka ugu xun ee aad naftaada ku ridi kartid ayaa ah in aad burburisid kalsoonida xaaskaaga.
Way adagtahay inaad dib u dhisto. Si kastaba waxaa jiraan dhowr waxyaabood oo aad sameyn karto si aad dib ugu guuleysto kalsoonida xaaskaaga haddii aad burburisay iyo haddii aadan waligaa burburin.
Noqo qof hufan
Waxaad u baahantahay inay iyada kugu kalsoonaato? Waa inaad joojisaa waxyaabaha aad ka qariso taasoo ah waxa loola jeedo noqoshada qof aad u hufan. Xaqiiqdu been ma sheegto balse dadka way sameeyaan taas.
U ogoloow isticmaalka sheey kasta oo aad isleedahay waxay u istcimaaleysaa sabab aaminaad darro oo ay ku jiraan taleefankaaga iyo Kumbiyuutarkaaga.
Waxba haka qarin
Lamaanayaasha isku furfuran waa kuwo qol u sameeya kalsoonida. Furfurnaanta waxay adkeeysaa kalsoonida. Ka nin ahaan, waxba haka qarin xaaskaaga. Guurkaaga waa inuu noqdaa meelaad dareento kalsooni aad ku sheegto wax kasta.
Fikradahaaga iyo dareenkaaga waa inay noqdaan waxay ogtahay xaaskaaga. Taas markii ay dhacdo waxay xaaskaaga dareemi doontaa inay tahay qeyb adiga kaamid ah sidoo kale waxay sare u qaadi doontaa kalsoonida ay kugu qabto.
Markaad ogaato inaad sameysay wax aanan u wanaagsaneyn ama dhaawacaya guurka, waa inaad ka raalligelisaa adigoo aanan lagu xasuusin.
Daacad ka noqo waxaad sameysay mar kastana ha u yeelin sabab waxa nacasnimada ah ee aad sameysay.
Ha isdifaacin adigoo og inaad qaldantahay.